isilumkiso: Impazamo xa bekuthunyelwa i-QUERY packet. I-PID = 1861 kwi /home/admin/web/info-all.com/public_html/wp-includes/wp-db.php kumgca 2056
Ukuzonwabisa | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
I sweatshi yamadoda eneentsimbi ezitshiweyo enomphefumlo
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 12.11.2019
Ngaba ufuna ukuba lowo umthandayo akuva ukuba uyakhathala, nokuba bakude kuwe? Ukuziva ubushushu bakho ngomzimba wakho? Emva koko qiniseka ukuba ubumbele ijezi. Ijezi yamadoda ngexhama, enikezelwe kumntu othandekayo, ...
Umdlalo weMunchkin: imigaqo
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 05.12.2019
Sonke siyayazi indlela emnandi ngayo imidlalo yebhodi. ERashiya, umdlalo webhodi "Monopoly" ithatha indawo yokuqala ukuthandwa. Kwindawo yesibini ngumdlalo webhodi "Munchkin", odlalwa ngokonwaba ...
I-Origami evela kwiimodyuli: intyatyambo. Yenza-wena ngokwakho imodyuli emiselweyo
Iimodyuli zeemodyuli zigubungela iintlobo ezahlukeneyo zezihloko. Iintyatyambo, izilwanyana, iimoto, izakhiwo zingenziwa ngephepha. Ukhetho lukhulu kakhulu. I-Origami evela kwiimodyuli zeentyatyambo lulongezo oluhle kulo naliphi na igumbi elingaphakathi. Ezo ...
Iimveliso zensimbi ze-DIY: iimpawu, iindidi kunye nemizobo
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 06.12.2019
Kwiimeko zangoku, xa intengiso iphuphuma yimpahla eveliswe ngobuninzi, imisebenzi yezandla iya isanda kwimfuno. Kwizixeko, amasebe awodwa kunye neevenkile zonke okanye iisalon ziqala ukuvela, apho zithengisa khona ...
Uyidlala njani chess? Imigaqo ye-Chess
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 07.12.2019
Ekuboneni kokuqala, kunokubonakala ngathi ukufunda indlela yokudlala i-chess kulula kakhulu, kodwa enyanisweni kuthatha umgudu omkhulu kunye nokukhumbula imigaqo embalwa esisiseko. Imbali yeziganeko zabantu ...
Iphethini evulekileyo "uShell" eneenaliti zokunitha: inkqubo kunye nenkcazo
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 05.11.2019
Ileyisi inika umtsalane okhethekileyo kwizinto ezinithiweyo. Kungenxa yoko le nto abafazi bezandla bezama ukuqonda iipateni ezininzi ezivulekileyo kangangoko kunokwenzeka. Olu lukhetho lomlilo oluqinisekileyo lokuhombisa nayiphi na impahla ngaphandle kwexesha. Kwinqaku, siza kuqwalasela ukuba ilingana njani ...
Indlela yokuhlobisa iibhutsi ngezandla zakho. Indlela yokuhlobisa iibhuthi zenkwenkwe kunye nentombazana
Vumelana ukuba akukho zihlangu, nditsho nezona zihlangu zisemgangathweni ophezulu, eziya kufudumeza imilenze yabantwana bakho kwiqabaka zasebusika ezingcono kuneebhutsi eziqhelekileyo. Yiyo kanye le nto iqhelekileyo. Kwaye ndifuna imilenze yomntwana ukuba ...
Ungayilungisa njani idyasi yoboya boya bendalo ngokwakho?
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 09.12.2019
Ingubo ye-mink ngumtsalane we-wardrobe, mhlawumbi, wonke umfazi ufuna ukuba nawo. Iimveliso ezenziwe ngoboya bendalo zihlala zixatyiswa kwaye bezikwifashoni. Eyona nto ibiza kakhulu, kokukhona ifuna ukugcinwa ...
I-anelier yoNyaka oMtsha ekhaya: isinxibo seQhawekazi
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 10.12.2019
Unyaka Omtsha yiholide entle. Ayibalulekanga kuphela ngumoya wobugqi, hayi ngokulindela uvuyo kunye nokulindelwa kwezipho, kodwa nethuba lokunxiba impahla yokunxiba engaqhelekanga, ukuqhela umfanekiso ...
Eyona mibono ye-selfie. Ujongeka njani ukuze umzobo obonakalayo ungowona mgangatho uphezulu?
Namhlanje, imizobo ethathwe nguwe kwikhamera ye-smartphone iya isiba yinto ethandwa ngakumbi kunobugcisa bokufota. Ukuba ufuna i-makeup egqibeleleyo, iinwele ezintle kunye nezinto ezinomdla zokudubula ezikumgangatho ophezulu, ungathatha i-selfie ...
Ungathunga njani into yokuthenga iimpahla ngePeppy ixesha elide ngezandla zakho?
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 11.12.2019
Intombazana ebomvu enenwele ebomvu yathandwa emva kothotho lwamabali encwadi ngumbhali waseSweden. Kwaye ayimangalisi into yokuba uninzi lwabantwana lukhethe lo mfanekiso ngokukodwa kwisinxibo somkhosi. Ukuqaqamba kunye nokulula ...
Iingcamango ezinomdla zesahlo sekhefu lasekwindalo kwindalo
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 26.09.2019
Ngamanye amaxesha kubonakala ngathi ekwindla lixesha lokuba lusizi kwaye uzivalele kwigumbi, usongele ngengubo efudumeleyo yoboya nencwadi okanye iti ezandleni zakho. Kodwa akufuneki uyijonge ngamanye amaxesha imvula kwaye ...
Ungayenza njani i-dodecahedron ngezandla zakho?
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 15.08.2019
Idodecahedron yinto engaqhelekanga enamacala amathathu e-12 enobuso obufanayo, nganye nganye iyi-pentagon eqhelekileyo. Ukudibanisa i-dodecahedron ngezandla zakho, akuyomfuneko ukuba ube nezakhono ezikhethekileyo ze-3D ...
Ungayenza njani ipikoko ephepheni ngezandla zakho
Iphepha yeyona nto ifikelelekayo ehlala ihlala iyonwabisa ukusebenza nayo. Unokwenza ubugcisa be-origami, iiposikhadi, iintyatyambo, ii-garland, iintaka, izilwanyana kunye nokunye okuninzi kuyo. Cinga ngendlela yokwenza ipikoko ...
Uyenza njani amaphiko ukuba "ubhabhe" kwi-masquerade nasebomini?
Kwiiklabhu zale mihla, kuhlala kuthengiswa iimpahla ezinamaxabiso aphezulu kunye namaqela ahlukeneyo. Kodwa izambatho zeCarnival aziloncedo kuzo kuphela. Uninzi lwethu luyakonwabela ukuthatha inxaxheba kwiifoto zemifanekiso, ukudala okungaqhelekanga kakhulu, ...
Yintoni onokuyenza iphepha ngezandla zakho ekhaya?
Ukuveliswa kwamaphepha ngaxeshanye kwenze inguquko yokwenene, njengoko yenza ukuba kube lula ukushiya ukusetyenziswa kwesikhumba esinexabiso eliphezulu. Ndiyabulela koku, inani leencwadi liye lenyuka, kwaye ulwazi lufikeleleke kubantu abaninzi. Sele…
Iinkcukacha ngendlela yokufaka inja kwi-zipper
Namhlanje siza kukuxelela indlela yokufaka inja kwi-zipper. Lo mbuzo unokuhambelana nezizathu ezahlukeneyo: inja inokwaphula, ilahleke okanye itsibe kuloliwe. Rhoqo imveliso ene ...
Kuphi kwaye njani indlela yokuqalisa isibane esibhakabhaka?
Izibane zasesibhakabhakeni zaziwa phantsi kweendidi zamagama, ezaziwa njenge "Chinese" kunye "neebhola zeminqweno." Kukholelwa ukuba ngaphambi kokuba ukhuphele esibhakabhakeni, kufuneka ubhale eyakho ...
Ubugcisa bephepha elikhanyayo: imizobo kunye neefoto. Funda ukwenza ubugcisa bephepha kunye nabantwana
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 27.11.2019
Iphepha yinto ekhethekileyo yokuyila. Abantwana bayayithanda iipropathi zayo: ukuqunjelwa, ukuqhekeka, uthathe nayiphi na imilo phantsi kweempembelelo zesikere, uguqule usuka kwiphepha elisicaba ube ngamanani amathathu-ntathu ngenxa yokusonga ...
Sithunga saziva iingxowa
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 08.11.2019
Kutshanje, iimveliso ezahlukeneyo ezivela kwiimvakalelo kunye nokuziva zifumana ukuthandwa ngakumbi nangakumbi. Izinto ezenziwe kwezi zinto zahlukile ngentuthuzelo yazo ekhethekileyo kunye nembonakalo entle. Kweli nqaku uza kufunda ...
Page 1 Page 2 ... Page 43 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-82 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-831,448.